Zvikonzero zvishanu izvo Mushanyi Akasvika Pane Peji Rako | Martech Zone
Makambani akawandisa anogadzira webhusaiti, nhoroondo yemagariro, kana peji rekumhara vasinganzwisise chinangwa chemushanyi. Vagadziri vezvigadzirwa vanomanikidza dhipatimendi rekushambadzira kunyora maficha Vatungamiriri vanomanikidza dhipatimendi rekushambadzira kuti ribudise kuwanikwa kwazvino. Zvikwata zvekutengesa zvinomanikidza dhipatimendi rekushambadzira kusimudzira kupihwa uye kutyaira zvinotungamira.
Izvo zvese zvinokurudzira zvemukati sezvo iwe uri kutsvaga kugadzira webhusaiti kana peji rekumhara. Kana isu tichigadzira nekuvandudza huvepo hwewebhu kukambani, iko iko iko kusundira kwatinowana kunowanzoitika ... zvese izvo kushayikwa. Dzimwe nguva inenge iri webhu ficha izvo zvinoshayikwa, asi kazhinji yenguva icho chiri chokwadi chisina kujeka nezve iyo kambani.
Ndiri kushanda pakudzidziswa kwekambani yekambani huru yeruzhinji ine mazana emabhizimusi uye ndakakumbirwa kuti ndiite mharidzo pazvinhu zvepeji rewebhu kana peji rekumhara. Chokwadi chinotaurirwa, peji rega rega rewebhusaiti yako peji rekumhara. Mumwe nemumwe mushanyi aripo aine imwe mhando yechinangwa. Chinhu chakakosha pane peji rewebhu kuona kuti urikupa nzira yemushanyi iyeye!
Kana isu tichigadzira masayiti, ma profiles, uye mapeji ekumhara emakambani, mutemo mumwe wandinofanira kugara ndichivayeuchidza ndeiyi ::
Isu hatina kugadzira uye kuvaka webhusaiti yekambani yako, isu takagadzira nekuivakira vashanyi vako.
Chii chiri Chinangwa cheMushanyi Wako?
Pane zvikonzero zvishanu zvakakosha zvekuti mushanyi wese anouya kune yako saiti, pasocial media profile, kana peji rekumhara. Ndizvozvo… 5 chete:
tsvakurudzo - ruzhinji rwevanhu vanosvika pawebhu peji vari kutsvagisa. Vangave vari kutsvagisa dambudziko muindastiri yavo kana kumba. Ivo vanogona kunge vari kutsvaga dambudziko nechako chigadzirwa kana sevhisi. Vangave vari kutsvagisa ruzivo rwemutengo. Ivo vanogona kunge vari kungozvidzidzisa ivo pachavo sechikamu chebasa ravo. Chero zvazvingaitika, pane nyaya ndeyekuti urikupa mhinduro dzavari kutsvaga here kana kuti kwete. Sezvo Marcus Sheridan anopindura mubhuku rake, Vanobvunza, Unopindura!
kuenzanisa - Pamwe pamwe nekutsvaga, mushanyi wako anogona kunge achifananidza chigadzirwa chako, sevhisi yako, kana kambani yako nemumwe. Vanogona kunge vachifananidza mabhenefiti, maficha, mitengo, timu, nzvimbo (s), nezvimwe. Makambani mazhinji anoita basa rakatanhamara rekutsikisa mapeji chaiwo ekuenzanisa evanokwikwidza (vasina kutora jabs) kuti vazvipatsanure. Kana mushanyi anga achienzanisa iwe kune vako vaunokwikwidza, uri kuzviitira izvo nyore kuti vaite here?
Kugutsikana - Pamwe mushanyi aive pasi pematanho ekupedzisira murwendo rwevatengi asi ivo vaine zvishoma zvinonetsekana nezve iwe kana kambani yako. Pamwe vari kunetsekana nezve nguva yekumisikidza, kana rutsigiro rwevatengi, kana kugutsikana kwevatengi. Kana mushanyi akagara pane peji rako, uri kugovera chero kusimbiswa? Zviratidzo zvetrust chinhu chakakosha - kusanganisira ratings, ongororo, humbowo hwevatengi, zvitupa, mibairo, nezvimwe.
Connection - Izvi zvinogona kuve chimwe chezvinhu zvinoshungurudza zvemazhinji makuru mawebhusaiti emakambani. Pamwe ivo vanopa software ... uye hapana bhatani rekupinda. Kana iwe uri mukwikwidzi uri kutsvaga basa - asi hapana peji rebasa. Kana ivo mubatanidzwa wakakura uye kuyedza kugadzirisa yemukati nzira uye nekuita, vanodzivirira kuisa nhamba dzenhare. Kana zvakatonyanya, ivo vanayo uye vanokusundira iwe kupinda dhairekitori renhare. Kana iyo webhu fomu yaunotumira inokupa iwe hapana mamiriro pane mhinduro kana kuti ungawana sei rubatsiro rwaunoda. Apa ndipo pane chatbots ari kuita nhanho huru. Yako tarisiro kana mutengi anoda kubatana newe… zvakaoma sei zvauri kuzviitira ivo?
Kutendeuka - Pamwe nekubatana, urikuita kuti zvive nyore here kune mumwe munhu anoda kutenga kuti zvinyatsoitika? Ndiri kushamiswa nenhamba yemasaiti kana mapeji ekumhara akanditengesera… uye asingakwanise kutengesa kwandiri. Ini ndakagadzirira - kiredhiti kadhi muruoko - uyezve vanondikanda munzira inotyisa yekutengesa kwandinomanikidzwa kutaura nemumiriri, kuronga demo, kana kutora rimwe danho. Kana mumwe munhu achida kutenga chigadzirwa chako kana sevhisi pavanenge vari pane yako saiti, vanogona ivo?
Saka… paunenge uchishandira kugadzira webhusaiti, nhoroondo yemagariro, kana peji rekumhara - funga nezve chinangwa chemushanyi, kwavari kusvika kubva, chishandiso chavari kusvika, uye nemabatiro aungaita chinangwa ichocho. Ini ndinotenda peji rega rega rinodikanwa rakagadzirwa nezvikonzero izvi zvishanu zvekuti vashanyi vari kumhara ipapo. Mapeji ako anayo here?
Tags: kumhara peji dhizainivanhushanyira zvikonzerohunhu hwevashanyimushanyi chinangwawebhusaiti chinangwa